निपा भाइरस संक्रमण : जोखिम उच्च, तयारी शून्य
जेठ ११, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं – छिमेकी मुलुक भारतको केरलामा फैलिएको अत्यन्तै संक्रामक निपा भाइरसले उपचारमा संलग्न नर्ससहित ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ।
नेपाल पनि यो भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छ तर यहाँ यो रोग भित्रिन नदिन तथा भित्रिइहालेमा नियन्त्रण गर्न कुनै पूर्वतयारी छैन।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकी निर्देशक डा. मनिषा रावलले निपाको संक्रमण भित्रिएमा नियन्त्रण र उपचार निकै कठिन हुने बताइन्। यो खबर आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
‘धरातल जे छ, त्यही भन्नुप-यो। निपा संक्रमण भित्रिए त्यसलाई नियन्त्रण र रोगीको उपचार गर्ने क्षमता अहिले हामीसँग छैन’, डा. रावलले नागरिकसँग भनिन्।
कति बेड छ, तलिमप्राप्त र विशेषज्ञ जनशक्ति छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।’ शुक्रराज अस्पतालमा कडा खालका सिजन फ्लुका बिरामीलाई आइसोलेसनका रुपमा क्याबिनमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘निपाको संक्रमण भएमा यतिले मात्रै पुग्दैन।’
चिकित्सकका अनुसार यो रोग लागेका बिरामी आइहालेमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको हेपाफिल्टरसहितको आइसोलेसन वार्ड चाहिन्छ।
हेपाफिल्टरले बिरामीको शरीरबाट निस्किने संक्रामक तत्वलाई निष्क्रिय बनाउँछ।
यस्तै जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका बिरामी बोक्न समेत विशेष खालको सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स चाहिन्छ।
नेपालमा यस्तो एम्बुलेन्ससमेत नभएको चिकित्सक बताउँछन्।
महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको परामर्शमा निपा भाइरसको सम्भावित संक्रमणसँग जुध्न तयारी थाल्ने जनाएको छ।
चमेरोबाट मान्छेमा सरेपछि मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकोले यो रोग अत्यन्तै जोखिमयुक्त मानिन्छ।
त्यसमा पनि भाइरस संक्रमण भएको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै बिरामीको अवस्था जटिल बन्छ।
त्यसैले उच्चतहको परीक्षण क्षमता नहुने हो भने रोगले धेरैको ज्यान लिन सक्छ।
यो रोगको संक्रमण भएपछि ७० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु ४८ घण्टाभित्रै हुने र बिरामी बाँचे पनि आजीवन अपांग हुने सम्भावना हुन्छ। रोग यकिन नहुँदै परिवारका सदस्य वा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमा समेत भाइरस सरिसक्ने जोखिम हुन्छ।
‘तत्काल परीक्षण गर्न सकिन्न, यकिन नहुँदै धेरैमा सरिसक्छ’, शुक्रराज अस्पतालका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले भने।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ११, २०७५०७:५२
श्रममन्त्री बिष्टको कुटनीतिक कदम : यूएईमा पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य नहुने
सावधान ! उपत्यकामा बिहान-बेलुका वायु प्रदूषण उच्च
२८ बर्षअघि खारेज भएको ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने तयारी
यी ५१ निकायका प्रमुख प्रधानमन्त्री: प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन म कहाँ–कहाँ प्रमुख छु !